ဘလော့ဂ် | PRO-X Software Solution
Domain & Hosting ဝန်ဆောင်မှု
စိတ်ကြိုက် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖန်တီးမှု
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ပတ်သက်ဆက်ဆံရသူတွေအားလုံးကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေချင်ကြပါတယ်။ လူတွေရဲ့ သဘောကျလက်ခံတာကို လိုချင်တာ၊ အချစ်ခံချင်တာက သဘာဝတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအကြောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းစိတ်ကျေနပ်မှုရဖို့ ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။တကယ်တော့ပြဿနာတစ်ခုထက်ပိုဆိုးတဲ့ ရောဂါတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်...
ကြည့်ရှု့သူများ : 1492
ဆွေးနွေးမှုများ : 0
Read Joe Biden’s first speech as president-elect
Joe Biden&nbsp;delivered his first speech to the nation Saturday night after&nbsp;being projected to become president-elect of the United States.Biden sought to unify the nation with his speech, calling for healing and cooperation between political opponents as&nbsp;President Donald Trump has continued to refuse to concede.He also laid out his firs...
ကြည့်ရှု့သူများ : 1383
အောင်မြင်သူများရဲ့ အလေ့အကျင့် ၆ ခု
အောင်မြင်ကြသူတွေမှာ အများနဲ့မတူတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ ရှိကြပါတယ်။ တွေးခေါ်ပညာရှင် Will Durant က ” ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ တစ်ခုခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ပါများရင် အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ၊ အဲဒီတော့ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သွားတယ်ဆိုတာလုပ်ရုံသက်သက်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ လုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိနေလို့သာ ဖြစ်တယ် ” လို့ ဆိုတယ်။ဒါကြောင့် အောင်မြင်သူများလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အလေ့အ...
ကြည့်ရှု့သူများ : 1682
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတစ်ယောက်မှာ ရှိထားသင့်တဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ၄ ခု
အောင်မြင်တဲ့ ကနဦးတစ်ခုထူထောင်နိုင်ဖို့ ရှိထားသင့်တဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ၄ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။၁။ Search Engine Optimization (SEO)SEO ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို နေရာတိုင်းမှာ ကြားနေရပါတယ်။ အခုဆိုရင် SEO ဟာ ကုမ္ပဏီတိုင်း မရှိမဖြစ် အသုံးပြုသင့်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ကနဦးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Search Result တွေမှာ ကိုယ်က...
ကြည့်ရှု့သူများ : 1766
You run Windows 10 on your own computer, but now you're using another PC outfitted with an older operating system. If you prefer to use the newest version of Windows, though, there'saway to run Windows 10 directly throughaUSB drive.You'll needaUSB flash drive with at least 16GB of free space, but preferably 32GB. You'll also needalicense to...
ကြည့်ရှု့သူများ : 3122
အောင်မြင်သူများဆုံးဖြတ်ချက်ချလျှင် အသုံးပြုသည့်နည်းဗျူဟာ ၁၀ မျိုး
အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားခြင်းမှအစ၊ ယနေ့ဝတ်ဆင်ရမည့်အဝတ်အစားများရွေးချယ်မှုအထိ၊ ကျွနုပ်တို့သည် တစ်နေ့လျှင်၊ ဆုံးဖြတ်ခက်ပေါင်း ၇၀ ခန့် ချမှတ်နေကြရသည်။ အောင်မြင်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များထံတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စိတ်ဖိစီးမှုကိုမည်သို့ ရှောင်ရှားရ မည်ဆိုသည့်အချက်အား အထောက်အကူပြုသည့် မှတ်သားစရာအလေ့အကျင့်အပြုအမူများ ရှိထားကြသည်။သင့်တစ်နေ့တာအချိန်သည်...
ကြည့်ရှု့သူများ : 1794
13 - 18 of ( 154 ) records
အမှတ် ၄၄၄(အေ)၊ ၄ လွှာ၊ ဗညားဒလလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာပေါ်က လုံခြုံစိတ်ချရမှု အရှိဆုံး ထိပ်တန်း ၁၀ နိုင်ငံ
သတင်းများ ရယူရန် စာရင်းသွင်းပါ
ဝမ်းနည်းပါတယ်− ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ